Adobe Photoshop dia mifanaraka amin'ny iPad Pro | Vaovao IPhone
Adobe dia nanavao ny fampiharana Photoshop roa lehibe ho an'ny iOS, Amboary sy afangaro, miaraka amin'ny fanohanana feno ho an'ny fampitaovana multitasking ao amin'ny iOS 9 ary miaraka amin'ny mifanentana amin'ny iPad Pro.
Ireo fampiharana roa ireo dia manolotra fomba fijery mizara amin'ny iPads, izay mamela azy ireo hiasa mifanila amin'ireo rindranasa hafa izay manohana ny endri-javatra. Ny fanavaozana dia voafetra amin'ny iPad Air 2, iPad Mini 4 ary ny iPad Pro manaraka. Amin'ny iPad Pro dia ahafahan'ny mpampiasa manova sary lehibe kokoa noho ny amin'ny fitaovana hafa.
Toy izany koa, ny fampiharana dia tokony hanana fiasa "fototra" ho an'ny Apple Pencil, fa ny Adobe kosa tsy namelabelatra ny dikan'izany. Apple Pencil dia manolotra fahatsapana mitongilana sy tsindry.
Fix Photoshop dia mifantoka amin'ny famerenana sy famerenana amin'ny laoniny ny sary, amin'ny fampiasana borosy sy fitaovana isan-karazany hanitsiana ny fifantohana, ny loko, ny fipoahana ary ny mahavoky. Ny fifangaroana dia namboarina mba hampiasa clipping, fampifangaroana ary sosona, na eo aza ny fitaovana fanitsiana sary sasany.
Maimaimpoana ireo fampiharana roa ireo, ary mihazakazaka amin'ny fitaovana misy amin'ny iOS 8.1 na taty aoriana izy ireo. Na izany aza, ny mpampiasa dia tsy maintsy manana fifandraisana Internet sy Adobe ID hampiasa azy ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » iPad Pro » Adobe Photoshop dia mifanaraka amin'ny iPad Pro ankehitriny